Nwere ike ịmata ọdịiche dị na Samsung Galaxy S6 mbụ site na mmepụta oyiri? | Gam akporosis
Nwere ike ịmata ọdịiche dị na Samsung Galaxy S6 mbụ site na mmepụta oyiri?
Paul Aparicio | | Samsung, Gam akporo Ndị aghụghọ
N'oge a, site na ọnụọgụ nhọrọ nke ibe weebụ na ụlọ ahịa ndị ọzọ dị, anyị nwere ike ịchọta mgbe niile nke chọrọ irigbu anyị wee gbalịa ibanye na ngwaọrụ na-abụghị nke mbụ. Enwere ọtụtụ akwụkwọ Chinese nke yiri ka ọ bụ ngwaahịa mbụ na mpụga, mana nkọwa ndị ahụ na-egosi na emeghị ha otu nlekọta ahụ dị na nke mbụ. Na Samsung Galaxy S6 Ọ bụ ngwaọrụ a ma ama, dịkwa ka anyị masịrị ya, otu a ka ọ dịkwa ndị adịgboroja.
Ọ bụ ezie na anyị chere na ọ dịghị mgbe a ga-arafu anyị, e nwere mbipụta nke ọma nke nwere ike ịghọgbu onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ejide ha n'oge ha na-ahụghị ihe niile. N'eziokwu, a na-akpọ ndị a mbipụta clones, ọ bụghị knockoffs, n'ihi na a mmepụta oyiri bụ nnọọ otu ihe na mbụ. Ma ọ bụ nke ọma, ihe fọrọ nke nta. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị obere mmejọ ọ bụla nke a galaxy s6 mmepụta oyiri.
1 Esemokwu dị n'etiti Samsung Galaxy S6 na mmepụta oyiri
2 Ọ bara uru ịzụta mmepụta oyiri nke Samsung Galaxy S6?
3 Ebe ịzụta mmepụta oyiri nke Galaxy S6
Esemokwu dị n'etiti Samsung Galaxy S6 na mmepụta oyiri
Site na isi ihe ndị a, mmepụta oyiri nwere ike ịnwe ọtụtụ n'ime ha ma ọ bụ naanị otu. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ka isi ihe ndị na-esonụ anyị na-ahụ na ngwaọrụ, ọ ga-adịrị anyị mfe iji otu okike mepụta ya. Anyị nwere ike ịchọta ezughị okè ndị a:
N’ụzọ ezi uche dị na ya, otu ụlọ ọrụ dịka Samsung enweghị ike imehie na nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị mepee igbe ma hụ na Samsung Galaxy S6 bụ agba dị iche karịa nke egosiri na igbe ahụ, Anyị nwere 99% ohere nke ịbụ n'ihu otu mmepụta oyiri.
Ọ dịkwa mkpa ileba anya na ngwa ndị etinye na igbe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ekweisi mbụ bụ Samsung ma nwee atụmatụ dabara nke ọma na ntị. Na mmepụta oyiri ekweisi bụ ọnyà, dị ka nke anyị nwere ike ịchọta na ekwentị ọ bụla dị ala.
Chaja mbụ nwere a ihe odide na-ezo aka n'ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa (ụgwọ ngwa ngwa). Na mmepụta oyiri Loader, ihe odide a apụtaghị.
Ozugbo anyị wepụrụ ekwentị ahụ na igbe ahụ, anyị ga-elekwa anya na ngwaọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịchọta S6 mgbe niile anaghị arụ ọrụ nke ọma, nke a ekwesịghị ịbụ ihe nkịtị. Ọ bụrụ na anyị gafere aka anyị n'etiti bezels na n'ihu ma ọ bụ azụ nke ọnụ, anyị kwesịrị iche na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbochi. Eeh anyị na-ahụ usoro ụfọdụ akpọpụtara nke ọma, nke nwekwara ike itinye na tray maka SIM, ọ ga-abụ na ihe anyị ji n'aka bụ mmepụta oyiri.
Ọzọ ihe nwere ike ịgwa anyị na ihe anyị nwere bụ a mmepụta oyiri bụ na n'ihu igwefoto na-adịghị n'ụzọ zuru okè hiwere isi n'ime oghere ya. Dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụ eziokwu na Galaxy S6, dịka ngwaọrụ ọ bụla, nwere ike ịgahie ma ghara inwe igwefoto etiti, mana nke a ga-abụ mmejọ ọgbakọ nke na-ekwesịghị ịdị. Ọ bụrụ na anyị ahụ na igwefoto dị n'ihu, azụ ma ọ bụ ọbụna ihe nyocha obi na-anọghị n'etiti, o yikarịrị ka anyị na-emezi otu oyiri. Ma ọ bụrụ na ọ nweghị nke akụkụ ndị a etinyere, anyị na-enwekarị oyiri.
Ekwesịrị idozi bọtịnụ ihu nke Galaxy S6. Ọ bụrụ na anyị na-akpali ndị mkpịsị aka n'elu bọtịnụ ahụ ma megharịa, ma eleghị anya, anyị nwere mmepụta oyiri.
Na akara azụ ebe ọ na-ekwu SAMSUNG (ọ bụrụ na ọ na-eme ya), na mmepụta oyiri ya nwere ike hụrụ dị ka square nke gbara ya gburugburu. Mmetụta anyị nwere mgbe anyị hụrụ igbe a dị ka a ga-asị na ha ejiri akara na-eme ka echiche nke ọrịa strok pụta. N'ụzọ ezi uche dị na ya, na S6 mbụ ụdị a zuru oke ma na-enweghị igbe ọ bụla gbara ya gburugburu.
Ihe zuru oke nke mbụ Galaxy S6 na-enyekwara anyị aka ihicha ya nke ọma. Anyị nwere ike iji ezigbo akwa hichaa S6 mbụ na-enweghị nnukwu mbọ, ihe anyị nwere ike ime na uwe elu ahụ anyị yi n’oge ụfọdụ. Otu oyiri ọ ga-efu ọtụtụ ihe karịa iji dozie ya, nke gosiri na ngwụcha ya adịghịzi ka nke mbụ.
Ga n'ihu izu okè nke Samsung si n'ichepụta, na bọtịnụ bọtịnụ mebere site na ala a ghaghị ịhụ ya n'okpuru ụfọdụ eserese zuru oke, ebe na mmepụta oyiri ahụ nwere ike isi ike ịmata eserese ndị a.
Samsung na-ekiri ihuenyo AMOLED, yabụ ọ bụrụ na anyị agbanye na ngwaọrụ wee tụgharịa ya, ihuenyo ahụ ka ga-adị oji. Na ihuenyo LDC nke mmepụta oyiri, mgbe ọ na-agbanye ya ma na-atụgharị ya, anyị ga-ahụ na agba na-ebelata ike ya wee gbanwee agba ntụ.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike iji oge ọgbụgba ọkụ tụnyere S6 nke anyị maara bụ nke izizi, mmepụta oyiri na-ewe ruo mgbe ebighị ebi na-amalite, nke bụ nkịtị n'ihi na ngwaike ya nwere ọgụgụ isi karịa.
Ọzọkwa ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iji ya tụnyere ihe mbụ S6, na mmepụta oyiri ihuenyo na-egosi a nnọọ ala nkọwa.
Ihuenyo nke S6 mbụ nwere mkpebi nke 1440 x 2560, ebe nke mmepụta oyiri nwere mkpebi nke ọkara, 720 x 1280. Anyị nwere ike ịchọpụta nke a na ngwa ndị na-egosi anyị data ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na S6 gị enweghị Njikọ 4G ma ọ bụ LTE, i nwere na mmepụta oyiri.
The gam akporo version nke a mmepụta oyiri ga-ọ bụla ikpe ikpeazụ, mgbe S6 mbụ ejirila gam akporo 6.x.
El akara mkpisiaka ihe mmetụta nke a mmepụta oyiri bụ otú imprecise na anyị nwere ike ịzọpụta mkpisiaka nke otu aka na unlock kpọghee ekwt ekwentị na otu mkpịsị aka nke ọzọ aka.
Ọ bara uru ịzụta mmepụta oyiri nke Samsung Galaxy S6?
Ọ dị mma, nke a bụ ajụjụ nde dollar. Ihe niile dabere, mana Agaghị m etinye ihe egwu. O doro anya na ihe dịka € 150 anyị ga-enwe ngwaọrụ nke dị ka Galaxy S6, mana ihe dị mkpa dị n'ime. Arụ ọrụ ahụ dị ala karịa nke ukwuu ma na-anwa i'somi Samsung's TouchWiz, lag ahụ ga-adị oge niile.
N'aka nke ọzọ, a Igwefoto foto o nwere ike inwe otu megapixels dị ka nke ọzọ, mana megapixels bụ naanị nha onyogho. Ihe dị mkpa bụ oghere na ngwanrọ (nhazi ahụ), nke a abụghịkwa ihe kachasị mma na mbipụta ndị China.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ ego, m ga-akwado ịchọ a Ekwentị China, mana site na ụdị ndị ama ama dị ka Xiaomi, Huawei ma ọ bụ Lenovo. Ọ nwere ike ịba uru iji ntakịrị ntakịrị, mana ọ ga-abụ nzọ dị nchebe. Ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike imeli ihe ihe eji eme ọfụma bara uru, anyị nwere ike ịchọ ihe nlere anya site na afọ ochie. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ngwaọrụ dị ọnụ ala, nke ezigbo akara na, ihe yiri ka ọ dị mkpa, na nkwado.
Ebe ịzụta mmepụta oyiri nke Galaxy S6
Ọ bụrụ na n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị anyị ị kpebiri ịzụta otu mmepụta oyiri ma achọghị ihe ịtụnanya, m ga-akwado ịzụrụ ya NO.1 S6I, nke dị na peeji nke 1949deal.com. Ọ bụghị otu mmepụta oyiri "kpọgidere" na nke mbụ dịka ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ na YouTube, mana nkọwa ya na ọnụahịa ya bụ € 120 emeela ọtụtụ ndị mgbasa ozi na-ekwu na ọ bụ n imomi kachasị mma nke Galaxy S6 rụpụtara ruo taa. Na NO.1 S6I nwere:
Nhazi: Quad isi 1.3GHz
Usoro njikwa: Android 5.0
Ebe nchekwa RAM: 1GB
Nchekwa nchekwa: 16GB
Ihuenyo: 5.0 sentimita asatọ HD IPS.
Mkpu ihu: 1.280 x 720.
Nnukwu ụlọIgwe n'ihu: 16MP.
Igwe n'ihuIgwe n'ihu: 5MP.
Njikọ: 3G, WIFI, GPS, Bluetooth.
BatrịBatrị: 2800 mAh.
Specdị ndị ọzọ: Storelọ ahịa, G-sensor.
Zụta NO.1 S6I
You zụtala ma ọ bụ ị na-eme atụmatụ ịzụta mmepụta oyiri nke Samsung Galaxy S6? Enwere onwe gị ịhapụ ahụmịhe gị na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Nwere ike ịmata ọdịiche dị na Samsung Galaxy S6 mbụ site na mmepụta oyiri?
Ee, ọ bụrụ na m hụ ndị nwere obere akpa ego, amaara m na ọ bụ ezigbo S6
Achọghị m ịma n'ihi na anaghị m amasị Samsung!
Chọghị ha, mana bia, jiri mmasị ị gụrụ edemede ahụ.
Zaghachi Roland Martínez
Alexander Star dijo
Vidio ahụ dị n’asụsụ Italiantali na isiokwu ahụ dị na Spanish, n’ihi ya, aghọtaghị m nna nke ihe ọ na-akọwa na vidiyo ahụ.
Zaghachi Alejandro Estrella
G ISN IS KA A NA-AK THER THE AR APỌ KA TOHES Mkpebi nke nyocha?
Cpu z dị na ụlọ ahịa
Radio.es, ụzọ ọhụrụ iji gee redio na gam akporo gị
Ndị dike Taichi Panda bụ ihe ọhụrụ site na SnailGames iji kpọga gị nnukwu MMO na ekwentị gị